China Diler Pro diode laser fanongotana volo mpanamboatra sy mpamatsy | Adelic
Fitaovana fanesorana volo laser an'ny Diler Pro
Model Model: DILER PRO
Laser karazana DILER PRO: Laser diode
Endri-javatra: Fanesorana volo, famelomana hoditra
Warranty: Fiantohana 2 taona sy fanohanana ara-teknika mandritra ny androm-piainany
DILER PRO dia milina fanesorana volo maharitra maharitra halavan'ny onja. Miaraka amin'ny halavan'ny 755nm / 808nm / 1064nm, afaka manala ny volo amin'ny vatana sy tarehy manontolo izy io amin'ny fotoana iray hahatratrarana ny famafana ny hoditra sy ny famelomana aina. Ny fomba fihenan-tsasatra telo (rano mangatsiaka, fampangatsiahana rivotra, fanamafisana ny ETC) ary ny safira dia mahatonga ny maripana ho ambany kokoa amin'ny 0 ° C ~ 5 ° C izay mahatonga ny fanalana volo tsy misy fanaintainana ary ahazoana aina kokoa.
Ny teknolojia fanesorana volo laser diode dia mifototra amin'ny dinamika amin'ny hafanana sy ny hafanana. Ny laser dia mamakivaky ny hoditry ny hoditra hahatratra ny fakan'ny folikelin'ny volo, azo entina ny hazavana ary avadika ho tavy follicle volo manimba hafanana, hany ka simba ny papilla volo tsy misy ratra manodidina ny sela.
Ny DILER PRO dia manambatra ny halavan'ny laser telo mahomby indrindra amin'ny mpangataka tokana, miaraka amin'ny tanjona manokana ny halalin'ny sela sy ny rafitra anatomika ao anatin'ny folicle volo. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny haavon'ny halavirana sy ny fidirana amin'ny halavan'ny halavany, miaraka amin'ny fandrakofana fanitarana, ny fitomboan'ny fampiononana ary ny fitakiana ambany fikojakojana, ny DILER PRO no fitsaboana azo antoka indrindra sy mahomby indrindra amin'ny fanesorana volo ankehitriny.
* Rafitra miasa misy patanty CFC
* Rafitra fivezivezena amin'ny rano patanty
* Fampidirana ny fametrahana & sivana & fanadiovana & fiarovana
* Ny fitoeran-drano efa miharihary dia manamora ny famongorana, ny fidiovana ary ny fikojakojana azy ireo
* Masinina ary tantano ny fampifanarahana ny takelaka roa
* Ivotoerana angon-drakitra klinika, interface tsara ho an'ny mpampiasa
* Mety amin'ny karazana hoditra rehetra izy (anisan'izany ny hoditra vita amin'ny tanna).
* Famantarana fampitandremana mandeha ho azy, azo antoka ny fiarovana
* Tifitra mahomby 20 tapitrisa miaraka amin'ny escort laser amerikana Coherent
* Fitsaboana amin'ny alàlan'ny fantsom-pandraisana tanana, androm-piainana mandritra ny 10 taona
* Ny fomba fampangatsiahana intelo dia mahatonga ny fanalana volo tsy misy fanaintainana ary mahazo aina kokoa
* Ny safira fifandraisana amin'ny safira, mahazo aina kokoa ary azo antoka
* 12 * 16mm habe amin'ny toerana lehibe dia manala ny volo amin'ny vatana afaka 30 minitra
* Ataovy miavaka araka ny ilainao ny sary famantarana
* Saron-by vy. Mety amin'ny fitaterana, tsy mora simba, fanaparitahana hafanana haingana
* Papanera fizarazarana. Mora ny manavao
* Kavina kely kokoa, tsy dia mpitatitra entana
Manaraka: Masinina mihena ho an'ny vatana mangatsiaka 2 amin'ny 1
Diler toeram-pitsaboana mampiasa 800w multi- halavan'ny laser h ...
Masinera fanesorana volo laser diavola
Mampiasa milina laser diode 808nm ny salon
Varavarana laser diode marolafy marindrano
Volana fanodinam-bidy avo roa heny diode laser volo ...
OEM ODM 1000w fitaovana fanesorana volo laser diode